ငါ PIXEL helper AM!
ဖိအားအနည်းငယ်ပေးပါ။ ထောက်ခံသူများသည်လူထု၏ဒေါသကိုနှိုးဆွရန်ကူညီသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အနုပညာပရောဂျက်များဖြစ်နိုင်ပါစေ။
ထောက်ခံသူများရနိုင်သည်3Deutsche pixel ကူညီ အဖွဲ့အစည်းများကိုထောက်ပံ့သည်။ PixelHELPER အတွက် ဖောင်ဒေးရှင်း gGmbH ကိုအောက်ပါပုံစံကိုသုံးပါ။ PixelHELPER အတွက် တော်လှန်ရေး GmbH နှင့် ဘာသာရေးသရော်စာ GmbH အတွက် Kurt Westergaard & Samuel Paty ပြတိုက် အောက်ပါအကောင့်နံပါတ်များ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ အသံကျယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူမျိုး၏သေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစ်စုလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းတဲ့အခါမှာအဲဒီမှာရှိပါ။
ထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောက်ခံလက်မှတ်တစ်စောင် ၀ ယ ်၍“ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောက်ခံသူ + မင်းရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ” ဆိုတဲ့ keyword အောက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်သို့အခမဲ့ငွေလွှဲပါ။ သင်၏ပမာဏအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
PixelHELPER ပုန်ကန်တယ် GmbH သည်ဘာသာရေးသရော်စာ GmbH အတွက် Kurt Westergaard & Samuel Paty ပြတိုက်မိုဟာမက်ရုပ်ပြောင်များကဲ့သို့ဘာသာရေးဘာသာရေးရုပ်ပြောင်များကိုပြသသောနေရာများတွင်ပြသသည်။
ယခုအချိန်တွင်“ Rainbow Kaaba” (သို့) Rainbow Kaaba (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ Mohammed ရုပ်ပြောင်ပြပွဲသော့ချက်စာလုံးအောက်၌သက်တံ့ရောင်ဖြင့်ပုံတူပုံကိုပံ့ပိုးနိုင်သည်။
ပိုင်ရှင် - PixelHELPER ပုန်ကန်တယ် GmbH သည်
IBAN ကုဒ်ကို: DE13 5609 0000 0017 1126 97
ဘဏ်: Volksbank Rhein Nahe Hunsrück eG
ပိုင်ရှင် - PixelHELPER ဒေးဂရမ်GmbH သည်
ဘဏ်: GLS ဘဏ်၊ Bochum
ပိုင်ရှင်: Kurt Westergaard & Samuel Paty Religious Satire Ltd. အတွက်ပြတိုက်
IBAN: DE25 ၅၆၀၉ ၀၀၀၀ ၀၀၀၇ ၇၂၀၈၄၄
Nuseir Yassin သည်ဘာလင်တွင် PixelHELPER နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပထမဆုံးသန်းသန်းပေါင်းများစွာမှ Rubiks Cube သည်ယခုအခါ PixelHELPER မှပိုင်ဆိုင်သည်။
အမေရိကန် KNOW တတ်ဖို့သင်ယူ!
အဖွဲ့ဝင်များက supporting များအတွက်အီးမေးလ်: အိုလီဗာ Bienkowski, oliver@PixelHELPER.org
အိုလီဗာ Bienkowski, Oliver@PixelHELPER.org 0049 / 163 71 666 23
pixel ကူညီထောက်ခံသူတွေလိမ့်မည် သြဂုတ်လ 20th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski